मानव शासनको प्रबन्ध – Word of Truth, Nepal
नूह कस्ता मानिस थिए? उत्पत्ति ६:९ अनुसार नूह परमेश्वरको साथ-साथ हिँड्ने ध___ मानिस थिए। उत्पत्ति ७:१ मा परमेश्वरले यी मानिसका बारेमा परमेश्वरले यसो भन्नुहुन्छ – “यस पुस्तामा मेरो सामु तँलाई ______ देखेको छु।”
नूह कसरी धर्मी थिए? नूहको रहस्य के थियो? यी मानिस कसरी धर्मी बने? उत्तर हिब्रू ११:७ को आखिरी भागमा पाइन्छ – “र __________द्वारा हुने ____________का हकवाला बने।” नूहसित भएको धार्मिकता विश्वासद्वारा प्राप्‍त भएको थियो। उनी परमेश्वरमा विश्वास गर्ने र उहाँले भन्नुभएको कुरा अनुसार काम गर्ने मानिस थिए। के अब्राहामले पनि आफ्नो धार्मिकता विश्वासद्वारा प्राप्‍त गरेका हुन् (उत्पत्ति १५:५-६)? __________।
तपाईं नि? परमेश्वरले हेर्नुहुँदा उहाँले तपाईंलाई धर्मी देख्‍नुहुन्छ कि अधर्मी? साँच्ची नै धर्मी व्यक्ति वास्तवमा एउटै मात्र हुनुहुन्छ। उक्त धर्मी व्यक्ति को हुनुहुन्छ (१ यूहन्ना २:१)? _______________। उहाँको धार्मिकता हामीले प्राप्‍त गर्न सकौं भनेर येशू हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्नुभयो – “किनकि _____ (ख्रीष्ट) मा हामी परमेश्वरका _____________ बन्न पाऔं भनेर पापै नजान्नुहुने (ख्रीष्ट) लाई परमेश्वर (पिता) ले हाम्रा निम्ति पाप तुल्याउनुभयो (२ कोरिन्थी ५:२१)।” जब कसैले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्दछ, परमेश्वरले उसलाई ख्रीष्टमा पूर्ण रूपमा धर्मी देख्‍नुहुन्छ।
एकातिर, ख्रीष्टबाहिर रहेको मुक्ति नपाएको व्यक्तिको बारेमा रोमी ३:१० ले बताउँछ – “______ कोही छैन, एउटै पनि छैन!” अर्कोतिर “ख्रीष्टभित्र” मुक्ति पाएको व्यक्तिको बारेमा रोमी ३:२२ ले बताउँछ – “अर्थात् परमेश्वरको ___________; यो येशू ख्रीष्टमाथिको ______________ विश्वास गर्ने सबैका लागि हो र सबैमाथि आउँछ।”
परमेश्वरले नूह र उनका परिवारलाई केही कुराहरू एकनास रहिरहनेछन् भनी बताउनुभयो। ती कुन कुराहरू हुन् (हेर्नुहोस् उत्पत्ति ८:२२)? ______________________________________ _____________________________________________। के हिउँदपछि सधैं बसन्त ऋतु आउँछ? के बसन्तपछि सधैं ग्रीष्म आउँछ? रातपछि सधैं दिन आउँछ? आज पनि ऋतु-चक्रको निरन्तरताले र दिन-रात चक्रले हामीलाई परमेश्वरको अचूक विश्वासयोग्यता दर्शाउँछ। यी कुराहरू कहिलेसम्मका लागि हुनेछन् भनी परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो? “__________ रहुन्जेल” (उत्पत्ति ८:२२)। के यस प्रतिज्ञा आजको लागि पनि हो? _________। उत्पत्ति ९:२ मा परमेश्वरले नूहलाई भन्नुभए अनुसार मानिसको डर कसलाई हुनेछ? ________ _______________________________। के मानिसलाई पशुको मासु खान अनुमति दिइएको थियो (उत्पत्ति ९:३)? _____________। परमेश्वरले पशुप्राणीलाई किन सृष्टि गर्नुभयो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नलाई सृष्टि विज्ञान, पाठ ८ मा हेर्नुहोस्।आफूले फेरि कुन कार्य कहिल्यै नगर्ने प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभयो (उत्पत्ति ९:११,१५)? _______ ______________________________। यसको मतलब यो होइन कि पृथ्वीको कुनै पनि भागमा कहिल्यै स्थानीय जलप्रलयको बाढी जानेछैन। परमेश्वर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने पृथ्वीका सबै मानिसहरूलाई नष्ट गर्ने विश्वव्यापी जलप्रलय कहिल्यै हुनेछैन।
उत्पत्ति ८:१७ मा हामी जहाजभित्र सुरक्षित रहेका सबै पशु प्राणीहरूको बारेमा पढ्छौं। यी प्राणीहरूको सम्बन्धमा परमेश्वरको योजना यो थियो, “तिनीहरू ___________मा प्रशस्त गरी बढून्, र तिनीहरू पृथ्वीमा ___________ र __________मा __________ हुँदैजाऊन्।”
मानिसजातिका निम्ति पनि परमेश्वरले यही चाहनुभयो। परमेश्वरले नूह र उनका छोराहरूसित बोल्नुभयो र भन्नुभयो, “_______________, _______ हुँदै र पृथ्वीमा ___________ जाओ (उत्पत्ति ९:१)।” के परमेश्वरले यही कुरा उत्पत्ति ९:७ मा पनि भन्नुभयो? _____________। मानिसजातिले सन्तानहरू जन्माएको, वृद्धि हुँदै गएको फैलिँदै गएको र पृथ्वीलाई फेरि ढाकेको चाहनुभयो। उत्पत्ति १:२८ सित तुलना गर्नुहोस्। पछि हामी देख्‍नेछौं, पृथ्वीलाई ढाक्दै जानुको सट्टा मानिस एउटै ठाउँमा सँगै बस्ने प्रयास गर्‍यो (उत्पत्ति ११)।
मानिसको प्राण यस्तो कुरा हो जसलाई परमेश्वले ठूलो मूल्यको ठान्नुहुन्छ। यसैले नै एउटा मानिसले अर्कोको प्राण लिनु ठूलो अपराध हो। उत्पत्ति ९:६ मा परमेश्वरले मानव जीवनको संरक्षण गर्न एउटा असल नियम दिनुभयो, “जसले मानिसको रक्तपात गर्छ, ____________बाटै त्यसको रक्तपात हुनेछ, किनभने परमेश्वरले मानिसलाई ___________ स्वरूपमा बनाउनुभएको हो।”
उत्पत्ति ९:६ को खास अर्थ के हो? यस पदले सिकाउँछ, हत्यारा (“जसले मानिसको रक्तपात गर्छ”) लाई मानिसबाटै मृत्युदण्ड दिइनुपर्छ (“मानिसबाटै त्यसको रक्तपात हुनेछ”)। परमेश्वरले मानिसलाई हत्यारालाई मृत्युदण्ड दिने जिम्मेवारी सुम्पिनुभएको छ। मानव जीवन अति विशिष्ट छ, “किनभने परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनुभएको हो।” त्यसैकारण मानव जीवनलाई नष्ट गर्ने व्यक्ति सबभन्दा ठूलो दण्डको योग्य हुन्छ।
आज सम्म पनि मृत्युदण्डको नियम लागू गर्न विश्वका सरकारहरू जिम्मेवार छन्। यस कुरालाई हामी रोमी १३:१-४ मा सिक्छौं। रोमी १३:३ मा हामी सिक्छौं, मानवीय शासकहरूले प्रायः असललाई इनाम दिन्छन् र दुष्टलाई दण्ड दिन्छन्। यदि एक व्यक्ति कानूनमुताबिक जिउने नागरिक हो भने उसलाई डराउनु पर्ने कारण हुँदैन। तर एक व्यक्ति कानूनविरपरित जिउने व्यक्तिलाई भने डराउनु पर्ने कारण हुन्छ! कसैले खराब काम गर्दछ भने ऊ ड_________पर्छ (रोमी १३:४ पढ्नुहोस्)। रोमी १३:४ ले हामीलाई सिकाउँछ शासकचाहिँ “___________का सेवक हुन्।” परमेश्वरले आज अपराधीहरूलाई आफै दण्ड दिने गर्नुहुन्न। अर्को जीवनमा त उहाँले यो निश्चय गर्नुहुनेछ्। तर आज त्यहाँ परमेश्वरका “सेवकहरू” छन् जसले उहाँका निम्ति उहाँका कामहरू गरिदिन्छन्। अपराधीहरूलाई दण्ड दिनका लागि परमेश्वरको प्रबन्धमा त्यहाँ पुलिस अफिसरहरू, न्यायधीशहरू, शासकहरू छन्। यो मानव शासनको जिम्मेवारी हो। अनि कहिले काहिँ शासकले “तरवार” (रोमी १३:४) समेत चलाउनु पर्ने हुन्छ (तरवार, मृत्युदण्डका लागि प्रयोग गरिने हतियार थियो)। आज अपराधीलाई मृत्युदण्ड अन्य तरिका प्रयोग हुन सक्छ (बिजुलीको करेन्ट जडित मेच, प्राणघातक इन्जेक्सन इत्यादि)। इतिहासको विभिन्न चरणहरूमा अन्य तरिकाहरू पनि प्रयोग भए, जस्तै झुण्ड्याएर दण्ड दिने, गिलटीन (guillotine) ले काट्ने वा क्रूसको मृत्युदण्ड समेत।
सुसमाचार वा खुशीको खबर यो हो, येशू ख्रीष्ट व्यवस्था उल्लङ्घन गरेका दोषीहरूका निम्ति संसारमा आउनुभयो (१ तिमोथी १:१५)। येशू निर्दोष र पूर्ण रूपमै पापरहित हुनुभएर पनि रोमीहरूद्वारा मारिनुभयो। तर येशूले त हामीले पाउनुपर्ने मृत्युदण्डरूपी जरिवाना तिर्नुभएको हो (रोमी ६:२३; रोमी ५:८; १ पत्रुस ३:१८)। दण्डरूपी जरिवाना तिरिनैपर्थ्यो, अनि त्यो जरिवाना ख्रीष्टले तिरिदिनुभयो! के तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईंको निम्ति सो गरिदिनुभयो भनेर? परमेश्वरले तपाईंलाई मृत्युदण्डले प्रहार गर्नुको सट्टा उहाँले आफ्नै पुत्रलाई प्रहार गर्नुभयो: “ख्रीष्ट ______ पापहरूका निम्ति मर्नुभयो” (१ कोरिन्थी १५:३)। हामी बाँच्न सकौं भनेर उहाँ मर्नुभयो!
नूहको जलप्रलयमा आठजना व्यक्तिहरू एउटा विशाल जहाजको भरमा बाँचे (१ पत्रुस ३:२०)। उक्त जहाजभित्र यी मानिसहरूले (पशुपंक्षी बाहेक) एउटा अर्को कुरा पनि साथमा बोकेका थिए — एउटा अति नराम्रो रोग (यर्मिया १७:९)–त्यो थियो पाप। आदमबाट वंशानुगत सर्दै आएको पापी स्वभाव जहाजको प्रत्येक व्यक्तिसँगै थियो (पाठ १ हेर्नुहोस्)। उत्पत्ति ९:२०-२१ ले नूहको हृदयमा पनि पापको समस्या थियो भन्ने कुरा कसरी देखाउँछ? _________________________________________________________________________________________ ________________________________________________।
संसारमा के त्यस्ता कुनै कुराहरू भइरहेकाछन् जसले हामीलाई प्रकाशको पुस्तकले भविष्यवाणी गरेको एकजूट हुने विश्वव्यापी शासन (सरकार) तर्फ लग्दै छ? संचार माध्यमका के कस्ता कुराहरूले संसारलाई “सानो” र झन् एकजूट बनाउन मदत पुर्याएकोछ? यातायातको क्षेत्रमा नि?
बाइबलले प्रार्थना “राजाहरू र _______ उच्च अधिकारीहरूका निम्ति चढाइऊन्” (१ तिमोथी २:१-२) भनेर ख्रीष्टियनहरूलाई आज्ञा गर्दछ। के तपाईं आफ्नो देशका शासकहरूका निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ? मन्त्रीहरू र सचीवहरूका निम्ति? पुलिस र न्यायधीश र स्कूलका शिक्षकहरूका निम्ति? उनीहरूले आ-आफ्ना काम सठीक तरिकाले गरून् भनेर के तपाईं प्रार्थना गर्नुहुन्छ? उनीहरू खराबको विरुद्धमा र असलको पक्षमा खडा होऊन् भनी प्रार्थना गर्नुहुन्छ? उनीहरूका मुक्तिका निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ?
के सरकारको अवज्ञा गर्नु वा मानिसका कानूनको अवज्ञा गर्नु कहिल्यै उचित हुन्छ? यसको जवाफ प्रेरित ५:२९ मा छ। पत्रुसले त्यसबेलाका यहूदी शासकहरूलाई भने, “हामीले ____________को भन्दा ______________कै आज्ञा पालन गर्नुपर्छ।” यसको तात्पर्य यो हो, हामीले पहिला परमेश्वरको आज्ञापालन गर्नुपर्छ। ख्रीष्टियनले कहिल्यै परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। हामीभन्दा माथि रहेका अधिकारीहरूले हामीलाई परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर भन्छन् भने हामीले त्यो कदापि गर्नुहुँदैन। मानिसका नियमहरूले बाइबलमा भएका परमेश्वरका नियमहरूलाई पालना नगर भन्छ भने हामीले त्यो कदापि गर्नुहुँदैन। पहिला परमेश्वरको आज्ञापालन गरिनुपर्दछ।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 16:12:072020-04-28 14:32:54मानव शासनको प्रबन्ध
विवेकको प्रबन्धप्रतिज्ञाको प्रबन्ध